Miyuu Sergio Aguero ka fikirayaa ka fariisashada kubadda cagta kaddib dhibaatadii wadnaha? – Gool FM
(Barcelona) 13 Nof 2021. Waxaa shalay soo if-baxay warar badan oo la xiriira xaaladda weeraryahanka kooxda Barcelona ee Sergio Aguero kaasoo haatan kasoo kabanaya xanuun kasoo wajahay dhanka wadnaha maadaama uu wadnihiisa yareeyay garaaca intii ay socotay ciyaartii ay Barca barbarraha 1-1 la gashay naadiga Deportivo Alaves taasoo ka tirsaneyd horyaalka La Liga isla markaana dhacday 30-kii October.
33-sano jirka weerarka dhexe ka ciyaara ayaa wararkaas kaga jawaabay bartiisa Twitter-ka isagoo beeniyay wararkaas isla markaana sheegay inuu dib usoo kabanayo saddexda bilood ee soo aaddan.
“Haddii aan ka jawaabo xanta, waxaan idin sheegi karaa inaan raacayo amarrada dhaqaatiirta kooxda, oo aan qaadanayo baaritaannada iyo dawooyinka si aan u arko sida aan ugu soo kaban karo 90 maalmood gudahood, mar walba si hagaagsan u fikir” ayuu Aguero kusoo koobay farriintiisa.
Dhinaca kale, kooxda Blaugrana ayaanan illaa iyo haatan laga helin war ku saabsan soo kabashada laacibka reer Argentina.
Antonio Conte oo iska diiday lasoo saxiixashada Hazard bisha January isagoo ka door biday xiddig kale oo u ciyaara Real Madrid